Ragga Oo Lixdaan Meelood Ka Eega Dumarka - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Ragga Oo Lixdaan Meelood Ka Eega Dumarka
Ragga waa daymo kaliya markii ay arkaan gabar marka ninka ragga ah gabaryahay wuxuu kugu arki karaa ilbiriqsiyo oo uu adiga dhan kugu qiimeyn karaa muuqaalkaaga ama qaabkaaga.
Ragga ayaa la tilmaamaa in dumarka iyaga oo il saarin ama arkin inay iyagu arkaan isla markaana ilbiriqsiyo kooban uu ku sawiran karo muuqaalkeeda waxayna ragga ay dumarka ka eegaan 6 meelood.
Hadaba 6 meel oo ragga ay dumarka ka eegaan hoos ka aqriso.
Sida caadiga ah wajiga ayaa ah Meesha ugu horeeyso ee ragga ay gabadha ka eegaan iyagoona ka qiimeeya quruxdeeda, qaabka ay Makeup-ka u marsato, dhoolla cadeynteed, indhaheeda, inay waji kaduud tahay ama caro badantahay qaabka wajigeeda iyo wax kasta oo lamid ah waxana uu ilbiriqsiyo ninka ragga ah kuugu sheegi karaa wax kasta oo wajigaada ku saabsan.
Haddii aad jeceshahay iyo haddii kale, markii nin uu rabo inuu ku eego waxa uu il xariifnimo ah ku eegayaa naasahaaga si uu u arko qaabkooda weyninkooda iyo guud ahaan muuqaalka guud maskaxdaadana gali nin kasta dookh ayuu leeyahay marka ay noqoto Naasaha, qaar ayaa jecel kuwa waaweyn qaarna kuwa yar yar qaarna kuwa dhex dhexaadka marka taasi dhib malahan waxaa uun lama xaqiiq ah in ninka ragga ah uu mar walbo naasaha kaa eegaayo gabaryahay.
Dibka ama Dabada
Dibka ama dabada waxa ay kamidyihiin meelaha ugu horeeya ee raggu ay ka eegaan haweenka iyagoo qiimeeya muuqaalka guud ee dibka iyo cabirkeeda inta ay la egtahay marka dumaryahoow ogaada in ninka ragga ah uu qeybta dambe kaa eegaayo mar walba.
Ragga mar walba wey eegaan qaabka labiska gabdhaha marka ninka daqiiqado ayuu ku arkayaa labiskaaga haddii aad labis xuntahay iyo haddii aad tahay qof shidan intaba marka labiskaaga qaab walba uu yahay waalala socdaa.
Meelaha layaabka leh oo raggu ay naagaha ka eegaan waxaa kamid ah timaha marka ragga wey soo jiitaan gabdhaha timaha qurxan marka haddii ay timahaaga yihiin kuwo si qurux badan u hagaagsan gabaryahay saaxiibkaa waxaad kala kulmeysaa ammaan badan waxaa hubaal ah inaan la rabin naag aanan timaha iska hagaajin oo haddii ay go’a ka qaado iga qari laleeyahay.
6. Muuqaalka guud
Ragga si dhow ayay u qiimeeyaan qaabka gabdhaha, qaabka waa aragti guud oo gabi ahaan gabdha markaas ku saabsan haddii ay noqon lahayd culeyskeeda, qaabkeeda guud lugeheeda iyo wax kasta oo ku saabsan qaab dhismeedkeeda marka ragga wey jecelyihiin dumar leh qaab dhismeedka wanaagsan.
Marka halka wax oo looga baahanyahay gabdhaha ayaa ah inay naftooda ka taxadaraan oo ay daryeelaan haddii aadan qaadin tallaabadaasna waxaad ogaataa inay jiraan dad kuu dhow oo aad kuula socda marka ha u dhaqmin waxba igama galin camal.
Taladaan ayaa waxaa loola jeedaa cun cunto caafimaad leh ama laga helaa, jird dhis sameey oo noqo qof nidaamsan.